नर्सका दु:ख र अधिकारको लडाइँ
माघ ५, २०७४ शनिवार ००:२०:०० प्रकाशित
ढिलो नै सही, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट बिनाकारण हटाइएका नर्सहरुलाई पुनर्बहाली गर्न हामी सफल भएका छौं। स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा सचेत तपाईं-हामी सबैको यसमा योगदान छ।
नर्सिङ सेवामा लागेका हामीलाई न्युनतम पारिश्रमिक दिन पनि हिचकिचाउने अस्पतालका सञ्चालक र पदमा बसेकाहरुले कम्तीमा यो सफलतापछि पछुतो महसुस गरेको हुनुपर्छ। किनकि अन्यायपूर्वक हटाइएका नर्सहरु पुन: काममा फर्कन पाएका छन्।
भविष्य सुनिश्चित गर्न अनकौं दु:खकष्ट गरेर आमा-बुवाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, सक्षम बनाउनका लागि। विडम्बना, हामी नर्सहरु महँगो शुल्क तिरेर नर्सिङ पढ्छौं, सक्षम बन्छौ, जटिल शल्यक्रिया गर्न डाक्टरहरुलाई सघाउनेदेखि बिरामी ठिक पार्न आफ्नै स्वास्थ्य जोखिममा राखेर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। यति गर्दागर्दै पनि न हाम्रो कामको उचित मूल्यांकन हुन्छ, न त उचित पारिश्रमिक नै पाउँछौ।
के यो पेसा महिलाहरुको भएकाले कहिले प्रधानता नपाएको हो? हरेक क्षेत्रमा हामी महिलाले नै समर्पण गर्नुपर्ने? पुरुषहरुको क्षेत्र भए अवश्य पनि चर्को नाराबाजी, ढुंगामुढा र गरेर भए पनि मुद्दालाई स्थापित गरेर उनीहरुले अधिकार लिइछाड्छन्। ढुंगामुढामा नउत्रिनु नै हाम्रो कमजोरी हो त?
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा क्रियाशील भइरहँदा पनि किन हामी अर्को नागरिकझैं बस्न बाध्य हुन्छौं? संविधान, कानुन र विधानले दिएका कुरा प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म? यस्ता कैयौं प्रश्नहरुसँग हामीसँग, लाग्छ- यसका जवाफ पाउन फेरि पनि संघर्ष नै सहारा हो। तर आशा गरौं त्यो दिन नआओस्।
पदमा बसेर लाभ लिने अनि कर्मचारीको अधिकारको विषयमा मौन बस्ने प्रवृत्ति अझै गएको रहेनछ हाम्रो समाजमा। यही घटनाले पनि त्यसलाई सतहमा ल्याएको छ। कतिसम्म भने सही मुद्दालाई उठाउँदा पनि उल्टै कमजोर बनाउनेहरु यहाँ सलबलाइरहेका छन्। तिनबाट सचेत हुन जरुरी छ।
नियम र कानुनसम्मत ढंगबाट नर्सिङ संघले अघि सारेका ११ वटै मागहरु सरकारले पूरा त गर्यो तर अब पनि सबै माग पूरा नहुने हो कि भन्ने शंका कायमै छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेको कालो बादल हट्नुपर्छ। अन्यथा, अधिकार नपाए खोसेर लिनका लागि हामी अवश्य एकताबद्ध हुने नै छौं। अधिकारप्राप्तिको यो लडाइँमा आमनागरिकको स्वास्थ्यमा पर्न जाने गम्भीर असरहरुको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ।
आफु आबद्ध पेसा र अधिकारको सुरक्षाका लागि हामीलाई कठोर निर्णय गर्न बाध्य नपारियोस्! पत्रकार तथा बुद्धिजीवी महानुभावहरुलाई पनि विषयको गाम्भीर्य बुझेर कलम चलाइदिनुहुन हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं!
भण्डारी एन्टिकरप्सन मुभमेन्ट नर्सिङकी अध्यक्ष हुन् ।